पहिलो पटक मानिसमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण ! | News Polar
पहिलो पटक मानिसमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण !
अमेरिकी डाक्टरले रचे इतिहास
वासिङ्टन । विश्वमा पहिलो पटक अमेरिकी मेरिल्याण्डस्थित अस्पतालमा डाक्टरहरूले मानिसमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका छन् । यो अचम्मको शल्यक्रियाको तीन दिनपछि सुँगुरको मुटु पाएका बिरामीले राम्रो महसुस गरिरहेको अस्पतालले सोमबार जनाएको छ । यो सफलतापछि पनि यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्न अहिले नै हतार हुनेछ ।
यो शल्यक्रियासँगै डाक्टरहरू जनावरको अङ्ग मानिसभित्र प्रत्यारोपण गर्ने लामो समयदेखिको प्रयासमा एक कदम अगाडि बढेका छन् । मेरिल्याण्ड मेडिकल सेन्टरका डाक्टरहरूले प्रत्यारोपणले आनुवंशिकरूपमा परिमार्जित जनावरको मुटुले तुरुन्तै अस्वीकार नगरी मानव शरीरमा काम गर्न सक्ने देखाएको छ । ती बिरामीको नाम डेभिड बेनेट हो र उनको उमेर ५७ वर्ष छ।
डाक्टरहरूसँग जीवन बचाउने अर्को उपाय नभएपछि बिरामी डेभिडलाई सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको बताइएको छ। यो प्रयोग सफल हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको बाबुलाई थाहा भए पनि उनको ज्यान बचाउने अर्को उपाय नभएको उनको छोराले बताए । शल्यक्रिया हुनुभन्दा एक दिनअघि बेनेटले भनेका थिए, “यो या त मृत्युको कुरा हो वा प्रत्यारोपणको कुरा हो। म बाँच्न चाहन्छु, मलाई थाहा छ यो अँध्यारोमा तीर हान्नु जस्तै हो, तर यो मेरो अन्तिम विकल्प हो।”
विश्वमा प्रत्यारोपणका लागि मानव अङ्गको चरम अभाव छ । यसै कारण वैज्ञानिकहरूले अब जनावरका अङ्गहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। गत वर्ष मात्रै अमेरिकामा तीन हजार ८०० मुटु प्रत्यारोपण गरिएको थियो जुन आफैँमा कीर्तिमान हो । “यदि यसले काम गर्यो भने यसले बिरामी भएका बिरामीहरूलाई अङ्गहरूको स्थिर आपूर्तिलाई अनुमति दिनेछ”, मेरील्याण्ड सेन्टरका पशु तथा मानव प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा मोहम्मद मोहिउद्दीन भने । एजेन्सी
# सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण
प्रकाशित : पुष २७, २०७८, १३:०८:५२